Maraykanka, 27 October 2017
Khamiis 27 October 2017
Mareykanka oo baaq u diray shacabka Kenya
Dowlada Mareykanka ayaa ku guubaabisay dhamaan shacabka reer Kenya in ay isdajiyaan oo ay diidaan qalalaaso isla markaana u hoggaansamaan mabaadi,da dastuurkooda, xilli maanta loo dareerayo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi.
Xiisad ka dhex oogan Mareykanka iyo Indonesia
Carrada ka dhalatay jeneral sare oo ka tirsan milatariga Indonesia oo loo diiday inuu soo galo dalka Mareykanka, ayaa dhaawac gaarsiisay xiriirka labada dal.
Axmed Cabdi oo u Tartamaya Doorashada Washington.
Wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Axmed Ismaaciil Cabdi ayaa ka mid ah musharraxiinta ugu cad cad ee doorashooyinka maamulka Dekedda iyo Garoonka Diyaaradaha ee gobolka Washington.
Trump: Twitter la'aantiis madaxweyne ma noqon lahayn
“Xaqiiqdii shaki ayaa igaga jira inaan madaxweyne ahaan lahaa, baraha bulshada la’aantood” ayuu yiri.
Jamhuuriga oo ansixiyey miisaaniyadda dowladda
Xubnaha Jamhuuriga ee Aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa cod 51-49 ku ansixiyey miisaaniyadda dowladda, taasi oo dhabbaha u xaareysa waxa uu madaxweyne Trump ugu yeeray “isbeddel weyn iyo cansuur dhimis”
Aqalka Cad oo Cambaareeyay Qaraxii Muqdisho
Waxaa isa soo taraya cambaareynta caalamiga ah ee loo soo jeedinaya kuwi ka danbeeyay qaraxi uu dhiiga badani ku daatay ee 14-ki October.
Minnesota: Xus Loo Sameeyay Dhibbanayaashii Weerarka Zoobe
Munaasabad loogu baroor-diiqay dadki ku dhintay weerarki 14-ki bishaan October ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa xalay lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnasota.
App-ka Cusub ee VOA laga Dhageysto.
Dhageysayaasha VOA waxaa loogu bishaareynayaa in VOA Somali ay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo lagu shuban karo taleefonnada, tabletyada iyo aaladaha kaleba.
Washington: Shirka Bangigga Adduunka iyo IMF
Magaalada Washington waxaa lagu soo afjaray shir bangigga addunka iyo hay'adda IMF ay soo qaban-qaabiyeen oo ay ka qeybgaleen madaxda hay’ddaha maaliyadda adduunka iyo shirkaddaha ganacsiga.
Trump oo Istaraatiijiyad Adag Ka Qaatay Iran
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii shalay ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo adag oo ku wajahan Dowlada Iran.
Trump oo Taageerada Kala Noqonaya Heshiiska Iran
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta taageerada kala noqdo heshiiska Nuclear-ka Iran, hase yeeshee lama filayo inuu baabi’iyo heshiiska.